Maitiro ekubatanidza yako smartphone kuTV ▷ ➡️ Emulator.online ▷ ➡️
Maitiro ekubatanidza yako smartphone kune terevhizheni
Nzira yekubatanidza su smart phone a terevhizheni. Kubatanidza foni yako kuterevhizheni yako inokutendera iwe tarisa mavhidhiyo akarodha pasi de Google Play , kuratidza Fotos a ystävät, tamba en una screen yakakura uye yakawanda. Uku kubatana kuri nyore uye kunogona kuitwa nenzira dzakawanda.
Kazhinji un waya , que ndatova ne imba, o kunyangwe isina waya mhinduro, anogona water zvaunoda nokuti Ver dzakatevedzana, Youtube mavhidhiyo, mafoto mafambiro uye zvimwe pahombe skrini. Tarisa uone dzimwe nzira uye consejos ipapo:
Unganidza yako smartphone kuTV yako kuburikidza neChromecast
Vazhinji vashandisi vanoshandisa Chromecasts, chigadzirwa che plug-and-play chakagadzirwa kubudikidza Google, kutarisa zvirimo zvema smartphones ako paTV. Kuenderana game Imba yeGoogle, tekinoroji iyo inopa simba Chromecast, chishandiso chako chinofanira kumhanya Android KitKat 4.4.4 kana kupfuura. Uye zvechokwadi TV yako inofanira have USB uye HDMI yekuisa yekushandisa imwe ye all shanduro dzemidziyo.
Chiratidzo chekuratidzira chinoonekwa pane iyo barra de kupinda kunanga nekukurumidza kana pamusoro pe chero kunyorera izvo Gungwa inoenderana neGoogle Cast, Chemhondoro Youtube, Netflix, Spotify, nezvimwe. Iyo rectangle ine mafungu mune imwe kona. Ingobatanidza chako chishandiso kuchinhu uye unakirwe neyako aunofarira zvemukati.
Iwe unogona zvakare kurodha kunyorera kubva kuGoogle Kumba uye kuiteedzera iko zvakananga. Iyi sarudzo inoshandawo kune avo vane Nexus Play, Android Bhokisi kana Mini PC.
Maitiro ekubatanidza yako smartphone kuTV kuburikidza neHDMI tambo
Kubatanidza yako smartphone kuTV kuburikidza neHDMI yekuisa, iwe uchazoda yemhando HDMI tambo, pamwe neadaptha iyo inobatanidza yako micro USB yekuisa USB kune iyo HDMI tambo (vangangoita vese smartphone vagadziri vane imwe iripo uye tambo dzechero mhando rinoita basa racho), inonzi zvakare OTG tambo.
Kana foni yabatana netambo TV, ingosarudza kwainobva TV chidzitiro. Kuti uite izvi, tinya bhatani rekuraira rakanzi "Tsime" kana "Fuente".
Maitiro ekubatanidza yako smartphone kuTV kuburikidza neWi-Fi
Kubatanidza yako smartphone kune TV kuburikidza neisina waya chiratidzo, TV yako inoda kuwana Wi-Fi (kazhinji smart TV dzinotsigirwa) uye ita kuti yako smartphone ibvumire iyi sarudzo kuburikidza neMiracast kana tekinoroji yakafanana.
Para saber Kana smartphone yako iine basa iri, enda kumenyu yekumisikidza nekukurumidza uye enda ku "Screen Mirroring"kana"Transmit"(zita rinogona kuchinja zvichienderana nemugadziri). Uye ita zvinotevera:
Kuburikidza neako TV sosi (Bhatani "Font" kana mucherechedzo wemuseve wataurwa pamusoro), Sarudzawo sarudzo ku isina waya kuratidza / kuongorora.
Vhura screen mirroring sarudzo pane yako smartphone. Smartphone yako ichatanga kutsvaga zvimwe zvishandiso zvakabatana ne network yeWi-Fi kuburikidza nechinhu ichi. Sarudza TV iyo yawakabatana netiweki;
Kamwe kana zvese zvishandiso zvazivikanwa, unogona kuona zvese zvaunoita pane yako smartphone skrini pane yako TV skrini.
Vamwe mafomu inobvumidza iwe kubatanidza foni yako kuTV skrini otomatiki. Muzhinji, iyi mhando yekushandisa inoenderana nevhidhiyo nemufananidzo, senge YouTube kana iyo gallery gallery.
Mukati merudzi urwu rwekushandisa, tinowana bhatani kumusoro kwepamusoro apo paine zvikwangwani zviviri zvakabatana kune imwe kana nechiratidziro uye chiratidzo cheWi-Fi. Nekudzvanya pairi, iri pedyo Smart TV ichaonekwa otomatiki uye kubatana kuchasimbiswa. pane mudziyo waunosarudza.
Maitiro ekumisikidza VPN network pane yako Android
Maitiro ekuona RAM mukushandisa uye ita yako Android nekukurumidza
Haikwanisi ndangariro pa Android: maitiro ekugadzirisa dambudziko!
Makodhi akavanzika eAndroid
Dzoreredza Dzadzimwa Mapikicha uye Mavhidhiyo kubva kuFoni Yako
Gadzira maitiro muGoogle Mubatsiri wako
Maitiro ekusarudza akanakisa mahedhifoni eApple yako
Chii chaunofanira kuita kana iyo foni isingabhadhare?
Maitiro ekuisa Google Play Chitoro pane yako Android
Maitiro ekugonesa USB debugging pane yako Android
Dzosera Android kune fekitori marongero
Maitiro ekufonera wega